Iza Ireo Ray Amandreny Loza Be Ao Hong Kong? · Global Voices teny Malagasy
Iza Ireo Ray Amandreny Loza Be Ao Hong Kong?
Voadika ny 04 Aogositra 2016 6:29 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, 日本語, English
Sariitatra mipoitra ao anaty tatitry ny Apple Daily mikasika ireo “ray amandreny Loza be”
Nanaitra izao tontolo izao, toy ny tafiotra, ny “Ray amandreny Loza Be” – Fomba fiteny iray avy ao Japàna manasongadina ny lafin'ny ray amandreny tsy mahay mandinika ankehitriny – indrndra fa ny faritr'i Azia, noho ny tafio-drivotra. Matetika io no mnondro ireo ray amandreny izay diso miaro loatra ireo zanany sady mitaky be loatra amin'ny sekoly misy ireo zanany.
Ao Hong Kong, feno ezaka fanazavàna ireo fomba azo tsapain-tanana miala amin'ny tokony ho izy ataon'ireo ray amandreny ireo ny aterineto. Mpiserasera amin'ny aterineto Baby-Kingdom iray, vovonana iray eo an-toerana fantatry ny rehetra, izay hifanakalozan'ireo ray amandreny hevitra mikasika ny fomba fitaizana ireo ankizy, no namaritra ireo toetra lehibe indrindra ananan'ireo ray amandreny ‘loza be’ ho toy izao manaraka izao:
1. [Ray amandreny loza be] manara-maso ireo zanany (tsy ijerena ny taonan'izy ireo). Ahiliny hobaben'izy ireo ny andraikitra tokony ho an-janany, tsy manome fizakantena azy ireo ka noho izany manaketraka ny fahafahana mandinika ananan'izy ireo.
2. Teren'izy ireo ny zanany hanao zavatra tena tsy tiany akory, toy ny fanarahana fampianarana aminà taranja isankarazany na fifandraisana amin'n hafa, manaisotra amin'izy ireo ny fahazazàny
3. Alohan'ny zavatra rehetra ny vokatra any ampianarana. Rehefa tsara ny vokatra, midera azy ireo ny ray amandreniny. Saingy raha vao ratsy kosa, ny sekoly no omeny tsiny, lazainy fa ny sekoly sy ireo mpanabe no olana….. amin'ny fampivadiana ireo vokatra ratsy amin'ireo antony ivelany. […]
5. Manam-pahazarana izy ireo hieritreritra fa marina foana ny zanany amin'ireo zavatra rehetra ataony, na dia zavatra tsy azo ekena eny anaty fiarahamonina aza izany. Tsy novelena tany anatin'izy ireo ny fahaizana miaina sy ny fanajana fototra.
6. Zavatra iray izay tsy ekeko loatra: tsikerain'izy ireo ny hafa noho ny fiaviana tsizarizary nipoirany. Tsy milalao miaraka amin'izy ireny. Ny tenany sy ny zanak'izy ireo no heveriny ho ambony noho ireny olona ireny…
Araka io famaritana eo ambony io, mbola azontsika atao ny manao safobe mantsina bebe kokoa hoe ireo ray aman-dreny lozabe ao Hong Kong ireo dia mampiseho fomba fitaizana tsy refesi-mandidy, voafaritry ny fifehezana sy faneriterena manana maridrefy ambony kokoa. Sady mampihanta no mamehy mafy ihany koa ireo zanany. Fomba iray hahatonga amin'ny faharingànana ny fanaranam-po – amporisihin'izy ireo ny zanany hanao ireo asa izay tian'izy ireo, fananana zavatra maro hafa ankoatry ny kilasiny. Mifamatotra amin'ny fanamboniantenan'ny fomba fitaiza tahàka izany.
Tsy tongatonga ho azy fotsiny tamin'izao ny tranga mikasika ny ray amandreny loza be. Lazain'ireo Japoney mpandinika fiarahamonina fa “shoshika” na ny fitontongan'ny taham-pahaterahana be loatra no nampisarongatra ny hamaroan'ireo ray amandreny loza be. Tsy i Japana irery anefa no kikisan'io olana ara-tsosialy io, fa na ireo faritra hafa efa mandroso ihany koa aza, toa an'i Hong Kong, fiarahamonina sinoa iray izay mitazona mafy ny soatoavin'ny fianakaviana, nefa manana taham-pahaterahana ambany dia ambany.
Etsy andanin'izany, nandritra ireo taompolo roa farany, haingana be ny fandrosoan'ny rafitra toekaren'i Hong Kong niorina tamin'ny fahalalàna. Mahazatra ny mino fa mandresy matetika hatrany amin'ny tsipika fiaingàna ireo mpandresy, izay no anombohan'ny ray amandreny mikarakara ny zanany vantany vao teraka izy ireo hifaninana ho amin'ny lalàna mankany amin'ireo garabola sy sekoly tsara indrindra. Tsy miankina sady lafo be ny ankamaroan'ireo sekoly manara-penitra.
Raha vao vita ny fanoratàna, tian'ireo ray aman-dreny loza be hohenoina sahady ny hevitr'izy ireo, ary ny fomba tena fampiasa mahazatra indrindra dia ny fametrahana fitarainana. Tsy mitsahatra ny mitaraina mikasika ny zanany ireo ray amandreny, na efa tonga eny amin'ny anjerimanontolo aza ny zanany.
Mpampianatra asa fanaovana gazety, Yuen Chan, monina ao Hong Kong, no namariparitra ny zavatra hitany nandritra ny andron'ny ray amandreny natao tao amin'ny anjerimanontolo iray ao an-toerana tamin'ny taona 2013.
Nandritra ny andro natokana ho an'ny ray amandreny, nohenoin'ireo mpampianatra ao amin'ny HKUST ampaharetana ny ahiahin'izy ireo sao mety hitarika ny zanany ho amin'ny làlana diso ny fampiraisana trano fatoriana ireo zanany ankizilahy sy ankizivavy sady nitaraina koa fa tsy ahitan'ny zanany tory mandritry ny alina ireo mpiray efitrano be tabataba. Nohazavain'izy ireo fa na dia tsy nosakanan'ny sekoly aza ireo fianakaviana mangataka ireo mpiasa an-tranony mba handamina ny efitranon'ireo mpianatra, dia tsy namporisika izany ihany koa izy ireo.
Maro no mino fa ny fomba fitaiza idso be fiarovana tafahoatra loatra, dia hiteraka andian-taranaka miankindoha tafahoatra, voafaritry ny atao hoe “Aretin'ny Printsy lahy/Printsy vavy”, fomba fiteny iray amin'izao fotoana ao Azia mba hamaritana ny toetra mpandoka tena sy ny fitiavan-tena, na ny fitondrantenan'ny “printsy vavy”.
Etsy ankilany, mety hitondra vokatra tsy araka izay niriana ireo fomba fanaon'ny ray amandreny manao fiavin'ny tarara amin'ny fanomezana traikefa maro mba hahombiazana any an-tsekoly. Miafara hatramin'ny firosoana ho amin'ny “fankahalàna sekoly” mihintsy aza ny an'ireo mpianatra sasantsasany. Fanadihadiana iray vao haingana no nahitàna fa ny 27 isan-jaton'ireo mpianatra ao Hong Kong no manam-pikasana hamono tena na hampijaly ny tenany, raha toa ka ny 63 isan-jatony tratran'ny fikorontanan'ny torimaso. Ny tsindry manjo ireo mpianatra dia tonga miaraka amin'ny fiandrasan'ireo ray aman-dreny zavatra tafahoatra sy ny rafitra fanabeazana mitodika amin'ny hamolavolana olona sangany amin'ny fanadinana.
Iharan'ny tsindry goavana ihany koa ireo mpampianatra noho ny kolontsain'ny fitarainana sy ny rafitra izay manao ho lohalaharana ny isa azo amin'ireo fanadinana. Fanadihadiana iray vao haingana no nampiseho fa eo amin'ny 86 isan-jaton'ireo mpampianatra ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany no nilaza fa miatrika tsindry avo dia avo na somary avo any am-piasana ary loharano fototra ihavian'ny tsindry ireo fitarainana sy zavatra andrandrain'ny ray aman-dreny (52 isan-jato).
Ary ao ireo ray amandreny. Raha somary toy ny biby toetra, mangirifirin'ny tsindry miavosa ho fandrafetana zaza iray manam-pahaizana izy ireo. Ireo fanantenana manaka-danitra loatra ananan'izy ireo ho an'ny zanany tokana dia midika fa ampy hiteraka ahiahy ny dingana kely iray miala amin'ny drafitra niaingàna.
Antony iray hafa mahatonga rarin-tsaina ihany koa mitarika ny ray amandreny ho biby toetra ny antony ara-bola. Miteraka tsindry ara-bola ho an'ny fianakaviana sasany ny ezaka fanoratana anarana ny zanany ho ao anatin'ireo fandaharam-pianarana samihafa, indrindra fa ireo kely fidiram-bola.
Kanefa, tsy afaka hanampy amin'ny famahana olana ny marika iray ratsy. Ny vondron'ireo mpampianatra liam-pivoarana dia mitaky fomba fitantànana vaodinika lalina kokoa amin'ny alalan'ny fampidirana ireo maodelin'na fitaizana samihafa ho an'ny ray amandreny ao Hong Kong.
Nanoratra andian-dahatsoratra momba ireo fomba fitaizana maoderina tao amin'ny vovonan'ny olom-pirenena inmediahk.net (#1, #2 ary #3) i Water Tsui avy amin'ilay vondrona, namintina fa:
… amin'ny maha-olon-dehibe, raha tenenina ianao hoe afaka misafidy ray amandreny niteraka, karazana ray amandreny manao ahoana no tianao? Toetra tsara toy inona no tadiavinao amin'ireo ray amandreny? Raha niasa hamoaka ny famaritanao manokana ireo ray amandreny idealy ianao, ampy ve ny fahatokianao mba ho ilay ray amandreny idealy izay nofaritanao ianao? Sahiran-tsaina ve ianao fa tsy dia tsara akory mba ho izany ary manilika manontolo fotsiny ilay hevitra ho lasa ray amandreny? Isika rehetra dia samy niaina izany fanahiana izany, ary soa ihany amin'ny ankamaroan'ny fotoana fa tosika manampy tsara ny fanahiana fa tsy fitarihana be fahatany…